Ukuxilongwa ngokweqile kwe-dyslexia? (ingxenye 2) - Ukuqeqeshwa Okuqondayo
Ulapha: Ikhaya » Ochwepheshe » Izihloko » Ukuxilongwa ngokweqile kwe-dyslexia? (ingxenye 2)
Labo abasilandelayo bayazi ukuthi sikhulume kaninginingi ngokuhlukanisa izinganekwane zamanga ngakho dyslexia, nangaphezulu uma kwenziwa ngabantu abakwenza ngendlela ecishe ibe serial (mhlawumbe ngenxa yokufuna ukubonakala noma mhlawumbe ngenxa yokungazi ngale ndaba).
Indlela yokwenza labo "abaphikisana" ngokungqubuzana nezinombolo (noma labo abadlala nabo besebenzisa ngokungafanele) iye yahlala isihlaba umxhwele futhi iholele ukuthi sibhale kabili ukuphendula eminye imiqondo ukusho okucatshangelwe okuncane.
Saqala sabhala le ndatshana ekuphenduleni emcabangweni wokuqagela ubekwa phambili wokuphika ukuba khona kwezifo ezithile zokufunda (ngokumelene nabo bonke ubufakazi obuvela ocwaningweni besayensi). Ngesinye isikhathi esikhundleni saphendula ngokukhomba ngephuzu 'kokongamela' kukaDaniel Novara okhona esitatimendeni sakhe somphakathi lapho ayevame ukukhuthaza izincwadi nezincwadi zakhe. Lokhu kubuka kuphathelene nokusetshenziswa okungalungile kwezinombolo noma imiqondo etholwe ngombono omuhle.
Sifuna ukuphendula namhlanje ku-cliché ukuthi kunokuxilongwa ngokweqile kwe-dyslexia. Futhi singathanda ukukwenza ngezinombolo. UDkt Barbiero we-IRCCS uBurlo Garofolo wase-Trieste ubanikela kithi ngokubambisana nabanye ozakwethu abaningi, futhi abavela kwezinye izifunda (iVeneto, iMarche, iLazio, i-Umbria, i-Abruzzo, iMolise neSardinia). Kunye lazo ucwaningo olushicilelwe ngonyaka ka-2019 bakhethe inani elikhulu kakhulu labafundi bebanga lesine ngezinhloso ezimbili:
Linganisa uma iphesenti yama-dyslexics ezikoleni bekulandelana okulindelwe (cishe i-4%)
Hlola ukuthi zingaki izingane ezi-dyslexic eza kukhonjwe kahle ngesikhathi sesikole samabanga aphansi (ukuxilonga okuningi kakhulu noma okumbalwa kakhulu?)
Emakilasini angama-712 abambe iqhaza ocwaningweni, izingane ezingama-9964 zabamba iqhaza ekuhlolweni kokuqala okusekelwe ekwahluleleni kothisha ngamakhono abo okufunda. Ngemuva kwaleli zinga lokuqala lokuhlola, kukhethwe izingane ezingama-2550 zazo, kusuka ezingeni lesibili lokuhlolwa (ngokususelwa ekuhlolweni kokubhala, kanye nezizathu ezimbili zokucabanga), izingane ezingama-744 kungenzeka zadonsa kanzima.
Ekugcineni, isisetshenziswa sokugcina sezingane sathola elinye izinga lokuxilongwa ukuze kuqinisekiswe noma kuvulwe ukusolwa kwe-dyslexia. Ngemuva kwazo zonke lezi zinyathelo, isibalo sezingane ezitholakale sine-dyslexia sasingama-350 kwezingu-9964, i.e. ukuba khona kwe-dyslexia kwavela ku-3,5% yamacala.
Izinombolo bezihambisana nokulindelwe, ngamaphesenti okuxilongwa kwabantu okusondele ku-4% okulindelwe ababhali bocwaningo.
Kuzo zonke izampula, bangu-126 kuphela abafundi ababesethole isifo okusho ukuthi, kuso sonke isibalo sezikole ezihloliwe kuphela i-1,3% yezingane eseyamukelwe njenge-dyslexic.
Isibalo sokuxilongwa sasesinqunyelwe e-North Italy kunaseNingizimu, sifika kuleli cala lokugcinaukukhonjwa kwe-1/5 yama-dyslexics kuqhathaniswa nalawo akhona ezifundweni.
Ngaphambi kokugxumela eziphethweni ngokususelwa kuma-clichés, idatha etholakalayo kufanele ihlolwe ngokucophelela. Kuze kube manje, yize kunjalo, ezindaweni eziningi zase-Italy empeleni kukhona ukuhlonza izingane ezingekho esimweni sokukhula kahle ngokomqondo: ngocwaningo esikhulume ngalo munye kuphela kwabangu-3 dyslexics okhonjwa ngesikhathi sesikole samabanga aphansi (ngisho neyodwa nje kwezi-1 kwezinye izingxenye ze-Italy). Ama-5/2 asele ngeke akhonjwe noma ukuxilongwa sekwephuzile kuzobekwa engcupheni, kaningi kube nemiphumela ebalulekile ekusebenzeni kwesikole kanye nokuphindaphindeka kwenhlalonhle yengqondo.
Ukuxilongwa kwe-Dyslexia. Igayidi encane yabazali
Ama-Hoaxes ku-dyslexia (futhi hhayi kuphela). Ake sicace
I-Dyslexia kanye nombono: ubuchopho buvumelana kanjani?
Inkumbulo yokusebenza ngamazwi kanye nokushesha ukuqamba izinkomba ze-dyslexia kubafundi basekolishi
I-Dyslexia kubafundi basekolishi kanye nabantu abadala abancane
Umculo ne-dyslexia: ukudlala ukuze ufunde kangcono?
Amaphrofayili wobuhlakani nge-WISC-IV ezinkingeni ezithile zokufunda
I-Dyslexia: umthetho we-170/2010 (i-Bianchi, iRossi, iVentriglia, 2010) - isibuyekezo
UBarbiero, C., Montico, M., Lonciari, I., Monasta, L., Penge, R., Vio, C.,… noCrescenzi, F. (2019). Izingane ezilahlekile: I-underdiagnosis ye-dyslexia e-Italy. Ucwaningo lukazwelonke oluhlukanisayo. PloS eyodwa, 14(1), i-e0210448.
i-hoaxes ku-dyslexia, dyslexia, ukuxilongwa kwe-dyslexia okweqile
Ukuxilongwa ngokweqile kwe-dyslexia? (ingxenye 2)2019-10-162020-02-22http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngUkuqeqeshwa kwengqondohttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2019/10/eccesso-diagnosi-di-dislessia.png200px200px
I-Multiple sclerosis: iphrofayili yokuqonda kanye nemisebenzi yansuku zonkeImibhalo, i-Neuropsychology, i-Multiple Sclerosis
Ulimi: umehluko phakathi kokuguqulwa nokwandaImibhalo, Ulimi